China Down bhachi fekitari uye vagadziri | Eigday
1. 100% jira reNylon ine mylar yekupisa Lining
2. LIGHTWEIGHT & BREATHABLE FABRIC-Inofema Ultra mwenje zvinhu, inodzivirira mvura, inodzivirira nylon machira uye hem chisimbiso mukudziya. Iyo ine yakanakisa isina mhepo uye inodziya-inochengeta mhando, ita shuwa kuti iwe unokwanisa kunakidzwa neakasarudzika kudziya uchiri kuchengetedza yako yepamusoro kuita munzira dzakawanda nekusa ganhurika kufamba!
3. SMART HEAT ACROSS BODY- Pisa nekukurumidza mumasekondi, 3 kabhoni fiber yekupisa zvinhu zvinounza kupisa munzvimbo dzepakati dzemuviri (kuruboshwe & kurudyi dumbu, pakati-kumashure); Chinja marongero ekudziisa (Kumusoro, epakati, pasi) nekungodzvanya nyore kwebhatani.
4. 2021 YAKADZIDZWA DESIGN: Nyowani mylar yekupisa Lining ndeyeganda-inoshamwaridzika, yakanakisa kabhoni fiber yekupisa sisitimu, inoita kuti usarasikirwe nechero kupisa kwakanyanya uye unakirwe nekudziya kwakanyanya kupfuura kumwe kunopisa linings pamusika.
5. PREMIUM QUALITY- Yakakwira mhando Hardware & isina mvura zipi, nyore kupinda muhomwe pamwe neinosvikika hood yakanyatso gadzirirwa kutonhora mangwanani uye kuwedzera kudzivirirwa pamazuva ane mhepo. Yakanaka Kisimusi chipo chemhuri, shamwari, vashandi.
6. MACHINE WASHABLE - Pasuru inosanganisira 1 * unisex inopisa hembe, 1 * bhatiri pack, 1 * chipo bhokisi, 1 * Laundry bhegi, 1 * Chaja uye 1 * isina mvura bhegi.
LIGHTWEIGHT & BREATHABLE FABRIC-Inofema Ultra mwenje zvinhu, inodzivirira mvura, inodzivirira jira reyiloni uye hem chisimbiso mukudziya. Iyo ine yakanakisa isina mhepo uye inodziya-inochengeta mhando, ita shuwa kuti iwe unokwanisa kunakidzwa neakasarudzika kudziya uchiri kuchengetedza yako yepamusoro kuita munzira dzakawanda nekusa ganhurika kufamba!
SMART HEAT ACROSS BODY- Pisa nekukurumidza mumasekondi, 4 kabhoni fiber yekupisa zvinhu zvinounza kupisa munzvimbo dzepakati dzemuviri (kuruboshwe & kurudyi dumbu, kora & pakati-kumashure); Chinja 3 yekudziya masetingi (Yakakwira, yepakati, yakaderera) neine yakapfava bhatani bhatani.
YAKADZIDZWA DESIGN - Nyowani SILIVHA mylar yekupisa Lining ndeyeganda-inoshamwaridzika, yakanakisa POLY HEAT SYSTEM, inovimbisa kuti iwe usarasikirwe nechero kupisa kwakanyanya uye unakirwe nehushushu hwakawanda kupfuura mamwe marasha anopisa pamusika. KUPUSA KWEMAHARA 12 MABASA EKUSHANDA ane bhatiri 5200mAh bhatiri.
PREMIUM QUALITY- Yakakwira mhando Hardware & isina mvura YKK zippers, nyore kupinda muhomwe pamwe neinosvikika hood yakanyatso gadzirirwa kutonhora mangwanani uye kuwedzera kudzivirirwa pamazuva emhepo.
Yakanaka uye inodziya sarudzo yako, yako yemhuri, shamwari nevashandi kuti unakirwe nekunze zviitiko senge chimota chemotokari, mudhudhudhu, kukwira makomo, kudzika musasa, kukwira, kukwira pachikepe, Kubata hove, Kuvhima kana hofisi maitiro uye bhizinesi kushandisa panguva yekudonha uye yechando mwedzi kurwisa kutonhora uye kutonhora mamiriro ekunze.
Dual Battery Chaja neUS, EU, UK & AU yakaiswa mune sarudzo.
MACHINE WASHABLE - Pasuru inosanganisira 1 * unisex inopisa hembe, 1pcs * Bhegi yekuwachira, 1pcs * Pe bhegi, 1pcs * charger, 1pcs * bhuku, 1pcs * desiccant, 1pcs * mabhatiri.
Kana paine chero chikonzero, iwe usiri kufara neangu Heated zvipfeko, ndapota taura nesu uye isu tichatarisana nayo nekukurumidza sezvazvinogona.
Pashure: Thermal underwear
Zvadaro: SAVIOR Kunze Isina Mvura Isina Mhepo Inopisa Gloves Yekuzeya, Snowboarding
5V jira rebhuruu
Wt003 pasi bhachi
Pasi Mabhachi WT001